‘एक घर एक पशु बीमा’ अभियान चलाएका छौं- नगरप्रमुख मगर – BikashNews
‘एक घर एक पशु बीमा’ अभियान चलाएका छौं- नगरप्रमुख मगर
२०७७ फागुन ११ गते २०:३० विकासन्युज
बागमती प्रदेश अन्तर्गतको रामेछाप जिल्लामा पर्ने ‘रामेछाप नगरपालिका’ कृषि उत्पादन तथा पर्यटकिय गन्तव्यको रुपमा चर्चित त छ नै साथै ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक रुपले पनि फरक विशेषता बोक्न सफल मानिन्छ ।
पूर्वतर्फ ओखलढुंगा जिल्ला, पश्चिममा मन्थली नगरपालिका, उत्तरमा लिखु गाउँपालिका र दक्षिणमा सिन्धुली जिल्लासँग सिमाना जोडिएको यो नगरपालिका २ सय २ दसमलव ४५ वर्ग किलोमिटरसम्मको क्षेत्रफलमा फैलिएर रहेको छ । ९ ओटा वडा रहेको यस नगरपालिकाको कुल जनसंख्या चाहिँ २८ हजार ६ सय १२ रहेको छ ।
नगरपालिकाका ठुला योजना तथा परियोजनाहरु के के छन्, जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनु अघि र निर्वाचित भईसकेपछि नगरपालिकामा कस्ता खाले परिर्वतन देखापरेका छन्, रोजगारीको अवसर सृजना गर्नमा नगरपालिकाले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ भन्नेलगायतका विषयमा सो नगरपालिकाका मेयर नर बहादुर थापा मगरसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुुत छ उक्त कुराकानीको अंश ।
नगरपालिकामा कोरोनाले पुर्याएको असर बारे छोटकरीमा बताइदिनुस् न ?
कोरोनाको सुरुवाती चरणमा धेरै कठिनाई एवं चुनौतीहरु देखापरेका थिए । बाहिरबाट नगरपालिका प्रवेश गर्नेहरुलाई हामीले कडाइका साथ १४ दिनसम्म क्वारेन्टिनमा राखेका थियौं । क्वारेन्टिनमा बस्नेमध्ये वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका एवं भारतबाट आएका नागरिकहरु नै बढि थिए । हामीले नगरपालिकामा १ सय बेडको क्वारेन्टिन स्थापना गरेका थियौं भने व्यवस्थित आइसोलेसन कक्षको पनि व्यवस्था गरिएको थियो । केही नागरीकलाई संक्रमण देखापरे पनि आइसोलेसन कक्षमै राख्नु पर्र्ने अवस्था भने आएन । कोरोनाले यहाँको शिक्षा क्षेत्रका साथै विकास निर्माणका काममा पनि ठुलो असर पुर्यायो ।
धेरै काम भइरहेको छ । हाम्रो नगरपालिका कृषिमै आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ । व्यावसायीक कृषि प्रणालिमा हामीले विशेष जोड पनि दिएका छौं । कृषिमा अनुदान देखि लिएर तरकारीको विउ वितरण कार्यक्रम पनि राखिएको छ ।
नमुना पकेट क्षेत्रको रुपमा हामीले सबै वडालाई छुट्याएका छौं । कृषि विकासको लागि भनेर सिँचाईको व्यवस्था मिलाएका छौं । बाख्रा पालन, माछा पालन, फलफुल, तरकारी, धान, कोदो खेती लगायत नगरपालिका भित्र गरिएको छ । ‘एक घर एक पशु बीमा’ भनेर हामीले कार्यक्रम पनि राखेका छौं । हामीले नगरपालिका भित्रका धेरै पशुहरुको बीमा गरिसकेका छौं ।
नगरपालिकामा रहेका ठुला योजना तथा परियोजनाहरु के-के हुन् ?
ठुलो योजनाको रुपमा नगरपालिका र संघीय सरकारको साझेदारीमा सडक कालोपत्रे गर्नका लागि डीपीआर गरेर काम अगाडि बढाइरहेका छौं । ४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटमा यो सडक कालेपत्रे भइरहेको छ । संघीय सरकार र नगरपालिकाको ५०-५० प्रतिशत समपुरक बजेटमा वर्वर हल निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ । ५ करोड रुपैयाँको बजेटमा टेन्डर प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढिरहेको छ । गौरवको आयोजनाका रुपमा नगरपालिकाको आम्दानीबाट ८ मिटरको सडक निर्माण भइरहेको छ । पुल निर्माणको कामहरु पनि सुरु भइसकेको छ । नगरपालिका भित्र भ्युटावरको पनि निर्माण भई रहेको छ । २ करोड रुपैयाँको बजेटमा भ्युटावरको निर्माण भइरहेको हो । लिफ्ट तथा खानेपानी योजनाहरु पनि संघीय सरकारको सहयोगमा अगाडि बढेको छ ।
यो वर्ष कोरोनाको कारणले राजश्व बाँडफाँडको बजेट आउन सकेको छैन । ५ वर्षको कार्यकालमा जेजति काम गर्ने लक्ष राखेका थियौं त्यो लक्ष्य अनुसार हामीले काम गर्न सकेका भने छैनौं । नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने हाम्रो लक्ष रहेको छ । नगरपालिकाको भवन र वडा भवनको निर्माण पनि गरिसकेका छौं । गत वर्षदेखि नै नगरपालिकाको भवन निर्माण गरेर हामीले नागरिकलाई सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं । नगरपालिकाका सबै वडामा सडक अनि विजुली पुगिसकेको छ । यसका साथै अस्पताल र विद्यालय भवनहरु चाहिँ कतै निर्माण हुने क्रममा छन् भने कतै चाहिँ निर्माण भइसकेका छन् ।
हामीले ‘एक वडा एक उद्योग’ को अवधारणा ल्याएका छौं । धेरै ठुलो उद्योग र व्यापारीक कम्पनी भने यहाँ छैनन् । तर हाम्रो नगरपालिका उद्योगको बढि सम्भावना बोकेको ठाउँ चाहिँ हो । नगरपालिकामा स्थानीय नागरिकले सञ्चालन गरेका साना तथा मझौला उद्योगहरु धेरै नै छन् ।
धेरै कर बुझाउने खालका कम्पनी त नगरपालिकामा छैनन् पनि । बरु पसल कर चाहिँ संकलन हुने गरेको छ ।
त्यहाँका कति नागरिकहरु कृषि पेशामा आवद्ध रहेका छन् ?
हाम्रो पालिकामा करिव ८० प्रतिशत नागरिकहरु कृषि पेशामा आवद्ध रहेका छन् । गत वर्ष हामीले राम्रो कृषि उत्पादन गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था मिलाएका थियौं । तर यो वर्ष भने कोरोनाको कारणले सो कार्यक्रम गर्न सकिएको छैन ।
तपाईं निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि र निर्वाचित भएर आइसकेपछि नगरपालिकामा कस्ता खाले परिर्वतन आएका छन् ?
म निर्वाचित भएर आइसकेपछि नगरपालिकामा धेरै परिवर्तन आएको छ । हाल नगरपालिकाको सबै ठाउँमा सडक पुगेको छ भने यातायात सञ्चालन समेत हुन थालेको छ । कच्ची सडकहरु धमाधम पीच हुन थालेका छन् । धेरै ठाउँमा खानेपानीको राम्रो व्यवस्था भएको छ । यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि राम्रो परिवर्तन आएको छ भने सबै वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना पनि भएको छ । सिँचाईको कामहरु पनि भएका छन् । नगरपालिकाको भवन निर्माण भएको छ । स्वास्थ्य भवनहरु निर्माण भएका छन् । विद्यालयको भवन निर्माण भएका छन् भने शिक्षामा गुणस्तर ल्याउन लागि परेका छौं । पुलको निर्माण गरेका छौं । मठमन्दिरको निर्माण गरेर धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिन खोजेका छौं । पिकनिक स्पटको निर्माण गरेका छौं ।
‘एक गाउँ एक उत्पादन’ लाई जोड दिनुपर्याे भने म कृषि र पशुपालनलाई नै जोड दिन्छु ।
नगरपालिकाले युवाहरुलाई रोजगारीको सिर्जना कसरी गरिरहेको छ ?
युवाका लागि भन्दै विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएका छौं । उनीहरुलाई सुलभ ऋणको व्यवस्था मिलाएका छौं । युवालाई व्यावसायीक तालिमको पनि व्यवस्था मिलाएका छौं । केही युवालाई विकास निर्माणको काममा पनि लगाउदै आएका छौं । नगरपालिकाका धरैजसो युवाहरु कृषि पेशामा आवद्ध रहेका छन् । युवाहरुले पशुपालन, खेती, कुखुरा पालन लगायतका कार्य गरिरहेका छन् ।
तपाईंलाई विकास निर्माणको कामहरु कत्तिको प्रभावकारी भएका छन् जस्तो लाग्छ ?
विकास निर्माणका कामहरु प्रभावकारी नै भएका छन् भन्नुपर्छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि हामीले लक्षमा पुुग्न भने अझ धेरै काम गर्नुपर्ने छ ।
समन्वय गरेरै काम गर्ने गरेका छौं । सिंहदरबार गाउँगाउँमा हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिए अनुसार भने अलि भइसकेको छैन । विकास बजेट भनेर प्रदेश सरकारबाट २० लाख रुपैयाँ बजेट आउने गरेको छ ।
स्थानीय तहमा काम गर्दा मुख्य समस्याहरु के-के आई पर्छन् नि ?
विकास निर्माणका काममा कहिलेकाहीँ समस्या आउने गरेको छ । जनताको अपेक्षा धेरै छ तर बजेटको आकार भने सानो छ । संस्कार हिजोको रहयो मात्र व्यावस्था चाहीँ नयाँ आयो । यसले गर्दा परिवर्तन छिटो नआएको हो ।
केन्द्र सरकारबाट पनि सामान्य सहयोग मिल्ने गरेको छ । समपुरक बजेट केन्द्र सरकारबाट आउने गेरको छ । विकास निर्माणको काममा पनि हाम्रो सहकार्य भइरहेको छ ।
नगरपालिकाले खेलकुद विकासका लागि के कस्ता योजनाहरु बनाएको छ ?
नगरपालिकामा सुकाजोर फुटवल स्टेडियमको निर्माण भइरहेको छ । वडास्तरको खेलकुद प्रतियोगिता पनि हामीले राख्ने गरेका छौं । बक्सिङ्ग, भलिवल, कराते, फुटवल लगायतका खेलहरु आयोजना गर्दै आएका छौं । खेलकुल विकासको लागि भनेर हामीले कर्मचारी पनि छुट्याइसकेका छौं ।